Taliye AMISOM Ah Oo Sheegay In Al-Shabaab Aan Lagaga Adkaan Karin Dagaalka Somaliya [WARBIXIN] - FOOLAAD MEDIA
Home » Wararka » Taliye AMISOM Ah Oo Sheegay In Al-Shabaab Aan Lagaga Adkaan Karin Dagaalka Somaliya [WARBIXIN]
Michel Kabango oo ah Abaanduule katirsan ciidamada AMISOM ee duullaanka ku jooga dalka Soomaaliya ayaa meesha ka saaray suuragalnimada in ay guud ahaan dalka Soomaaliya ka tirtiraan awoodda Xarakada Al-Shabaab, isagoona sheegay inuusan isbaheysigoodu heysan awood ciidan iyo agab ku filan oo ay ku qabsan karaan guud ahaan dalka Soomaaliya.
Kabango oo katirsan saraakiisha ciidamada Uganda ee jooga Soomaaliya islamarkaana hadda hogaamiya ugu yaraan 5,000 oo askari oo ka howlgala Banaadir iyo Sh/hoose ayaa sheegay in ay weli la kulmaan caqabado amni oo kaga imaanaya Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab kuwaas oo ay ka mid tahay weerarada toos ah iyo qaraxyada lagu beegsanayo gaadiidkooda.
Wuxuu tilmaamay in weli Xarakada Al-Shabaab ay maamusho magaalooyin dhowr ah oo katirsan Sh/hoose kuwaas oo ay ka mid tahay Jannaale, Awdhiigle, Mubarak, Sablaale, Kurtun Waareey iyo kuwo kale, isagoona tilmaamay in ciidankoodu ay u suuragali weysay in ay guud ahaan gobolka ka saaraan xooogaga Al Shabaab.
“Markii laga qabsaday Muqdisho waxay Al-Shabaab badaleen xeeladihii dagaal ee ay adeegsan jireen waxay bilaabeen weeraro gaadmo ah, qaraxyo iyo dilal qorsheysan Waxay isku qeybiyeen jabhado kala gooni gooni ah, waxayna beegsadaan bartilmaameedyada ciidanka ee nugul” ayuu yiri Michel Kabango.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Al-Shabaab awoodoodu waxay hadda ku xoogan tahay gobollada, mana heyno awood aan ku qabsanno goboladaas, Tirada ciidankeenu waa kuwo xadidan oo gaaraya ilaa 22,000 oo askari, hadana waaba lasii dhimi doonaa oo waxaa lagusoo koobi doonaa 19,000 oo askari”.
Michel Kabango ayaa sidoo kale sheegay in maleeshiyaatka xukuumada Federaalka ay gaarayaan ugu yaraan 10,000 oo askari balse aysan awood u lahayn in ay ka hortagaan weerarada Al Shabaab Wuxuu tilmaamay in magaallo waliba oo ay kasoo baxaan ay durbaba ku dhacdo gacanta Shabaabul Mujaahidiin maadama aysan maleeshiyaatku lahayn awood ay isku difaacaan.
Wuxuu tilmaamay in maleeshiyaatka DF-ka aysan weli helin dib udhis iyo qalabeyn ku filan, dhanka kalena ciidankoodu tiro ahaan aysan u suuragaleynin in ay isku fidiyaan guud ahaan dalka Soomaaliya.
Wuxuu sidoo kale sheegay in aysan heysan qalab ku filan haddii ay tahay diyaaradaha hilicopters iyo gawaarida gaashaaman sidaas darteedna aysan waajibaatkoodu gudan karin sidii la rabay.
Ciidamada AMISOM ayaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay ku jiray dib u gurasho wixii ka dambeeyey markii ay Mujaahidintu cagta mariyeen qaar ka mid ah saldhigyada military e ciidankaas ay ku leeyihiin koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.